Toy izany koa ireo toeram-piasana Lenovo ThinkPad P Series | Vaovao momba ny gadget
Toy izany koa ireo toeram-piasana Lenovo ThinkPad P Series vaovao
Lenovo dia manana rakitsoratra mafy momba ny toeram-piasana finday. Miresaka momba ireo solosaina finday natokana ho an'ny zavatra rehetra ireo, fizakantena, fanoherana, fitaovana ary fifandraisana izay niaraka tamin'ireto solosaina finday ireto tamin'ny orinasa sinoa nandritra ny fotoana ela. Lenovo's P-Series dia eo am-panaovana fivoarana lehibe ankehitriny, koa raha liana amin'ny fanavaozana ny solosainao finday ianao dia zahao izany Inona avy ireo toetoetran'ireto solosaina finday ireto alohan'ny hividianana zavatra, ary azo inoana fa hanintona anao izy roa amin'ny vidiny sy amin'ny tombony ary azonao mora foana ny iray amin'izy ireo.
Mandeha any izahay miaraka amin'ny fitaovana Lenovo ary inona avy ireo toetra mampiavaka azy ireo izay mamaritra ny maha-ilaina azy ireo hanatanterahana ny asa.
Ity laptop Nvidia ity dia hanana processeur Intel Xeon E3-V6 (tsy latsa-danja), iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena, miaraka amina carte graphique NVIDIA Quadro M2200M. Mba hamindra ny fandaharana rehetra tsy misy fikorontanana dia manana succulent izahay 64GB an'ny RAM DDR4. Mikasika ny fitahirizana angona anatiny dia hanana safidy hatramin'ny 2 TB izahay amin'ny ankapobeny.
Ny efijery dia tsy tavela any aoriana, izay hofidintsika araka izay ilaintsika, Ny FullHD dia samy mikasika sy mahazatra fotsiny mba hahitana, ary amin'ny farany 4K UHD, tontonana IPS rehetra.
Ny fifandraisana dia miaraka amin'ny 3.0 USB efatra. Mini DisplayPort 1,2, Intel Thunderbolt 3 (USBC) iray hafa, fifandraisana Ethernet hamoahana antsika amin'ny olana, audio jack, mpamaky karatra mahazatra ary ExpressCard ary farany fifandraisana HDMI 4.1, ankoatry ny Bluetooth 4.1 vPro efa mahazatra, Fifandraisana WiFi sy 4G LTE-A.
Izy io dia hihazakazaka Windows na Ubuntu, araka ny safidintsika, raha manana tsy latsaky ny 1.400 dolara hanombohana ny solosaina finday isika. Mampihomehy fa mora kokoa noho ny MacBook Pro Touch Bar.
Dikan-teny vita amin'ny endriny kokoa an'ny teo aloha, manana habe kely kokoa nefa miatrika ny fitsipiky ny fanoherana. Amin'ity tranga ity dia hanana processeur isika Intel Core i7 taranaka fahafito, miaraka amina carte graphique NVIDIA Quadro M520M. Ho an'ny fitehirizana dia hisafidy ny SSD na HDD isika ary hatramin'ny 1TB roa.
Tsy dia mifandray loatra, mazava ho azy, Bluetooth 4.1, WiFi ary mpamaky karatra 4-in-1 hanafaka antsika amin'ny olana izany. Ny solon'ny fahatsiarovana RAM dia mitovy amin'ny maodely teo aloha, na dia tsy misy na inona na inona manondro fa afaka miala mora foana amin'ny 32GB isika. Ary farany, ny efijery izay nofidintsika mifototra amin'ny filantsika, ny FullHD dia samy mikasika na ny mahazatra fotsiny mba hahitana, ary amin'ny farany 4K UHD, ireo takelaka IPS rehetra.
Anisan'ny fahafaha-mahita hafa hahitantsika USB 3.0 telo, ny iray amin'izy ireo dia hahafahantsika mandoa vola izay fitaovana ampifandraisintsika aminy hatrany. Ankoatr'izay, manana fifandraisana Ethernet, jack audio, USB-C (Intel Thunderbolt 3) ary HDMI 4.1 mifototra amin'ny Dolara 1.050.
Inona no tadiavinao fahefana? Aza mieritreritra fa hanadino anao izahay, ary ity modely ity dia manana processeur indray Intel Xeon E3-V6, miaraka amin'ny a NVIDIA Quadro P5000M, ny hafa RAM 64GB hamindra ny zava-drehetra amin'ny sokajy DDR4 mora foana.
Mitahiry hatramin'ny 2TB amin'ny HDD, ary mpanoratra DVD ahafahantsika mivadika ho bay bay an'ny kapila mangarahara miaraka amin'ny tahiry 1TB. Indray mandeha indray, hisafidy ny efijery mifanaraka amin'ny filantsika isika, ny FullHD na ny mikasika na ny mahazatra fotsiny mba hahitana, ary amin'ny farany 4K UHD, ireo takelaka IPS rehetra.
Ny fifandraisana dia tsy lavitra any aoriana, Thunderbolt 3 (USB-C), miaraka amina seranan-tsambo USB 3.0 efatra, ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny teknolojia "mandeha foana". Mpamaky karatra marani-tsaina, fifandraisana am-peo, fifandraisana an-tserasera Ethernet mahazatra, Mini DisplayPort, ary fifandraisana HDMI 1.2 hampiala antsika amin'ny lalana. Amin'ny lafiny tsy misy tariby dia hanana Bluetooth 4.1 vPro isika, fifandraisana data 4G LTE-A WWAN ary ny azo atao mitovy amin'ny rafitra fandidiana toy ny tamin'ny maodely teo aloha, Ubuntu sy Windows 10.
Niakatra kely ny vidiny, misy amin'ny volana aprily rehetra ary ho an'ity maodely ity tsy misy hafa noho ny $ 1.850, mora vidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Toy izany koa ireo toeram-piasana Lenovo ThinkPad P Series vaovao
ZTE Quartz no ho Android Wear voalohany azo anaovan'ny mpanamboatra sinoa
Ahoana ny famoahana ny fisoratana anarana avy amin'ny famandrihana rehetra nataonao tamin'ny mailaka Gmail anao